Ny Google Pixel XL dia mitentina $ 285 | Vaovao momba ny gadget
Isaky ny misy orinasa lehibe mandefa terminal vaovao eny an-tsena, fitaovana vaovao iharan'ny fitsapana fanoherana samihafa, fanandramana izay amin'ny tranga maro dia mihoa-pefy loatra ary tsy maka tahaka ny isan'andro amin'ny fampiasana ara-dalàna ny fitaovana. Saingy navoaka koa ny vidin'ny famokarana ireo singa izay anisan'ny fitaovana. Miankina amin'ny famoahana izay mamoaka ity vaovao ity, azonao atao ny mampifantoka ny vaovao amin'ny alàlan'ny fiantohana fa ny mahasamihafa ny vidin'ny famokarana sy ny vidin'ny fivarotana dia tombony.
Avelao ireo lohateny mampihetsi-po, ilay iray amin'ity lahatsoratra ity dia tsy, hitantsika ny fomba nanontana ny vidin'ny singa rehetra amin'ny Pixel XL vaovao araka ny filazan'ny orinasa IHS. Araka ny voalazan'ity orinasa ity ny vidin'ny fanamboarana ny Google Pixel dia hatramin'ny $ 285. Rehefa dinihina fa ny vidin'ny terminal any Etazonia dia 769 dolara, ny fahasamihafana misy eo amin'ireo vola roa ireo dia tsy tombony satria ny vidin'ny famokarana dia tsy maintsy ampiana amin'ny vidin'ny fandefasana, ny R&D, ny fizarana ary ny vidin'ny fivoriambe.… Ka ny vidiny farany amin'ny fanamboarana ny terminal sy ny famarotana izany any amin'ireo magazay izay zaraina dia miakatra be.
Ny ankamaroan'ny orinasa teknolojia, ao anatin'izany ny Apple (izay voalaza hatrany fa mahazo maridrefy biby isaky ny terminal amidy), mahazoa tombony 21-22%, izay mampiseho amintsika indray fa ny vidin'ny famokarana dia iray amin'ireo miovaova tafiditra amin'ny vidin'ny terminal. Ny vidin'ny famokarana an'ity terminal ity dia tena mitovy amin'ny zavatra hitantsika ao amin'ny iPhone 7 Plus sy amin'ny Samsung S7 Edge, izy rehetra dia miorina, mihoatra na latsaka, ao anatin'ny sokajy farany ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny Google Pixel XL dia mitentina 285 $ ny vidin'ny famokarana
Tena tsara fa ankoatr'izay dia misy karama be dia be, marketing ary bla bla bla
Ny fivarotana famantaranandro marani-tsaina dia mitohy mihena